तेजबहादुरको परिवारलाइ साइड लगाउने योजना त्यो रात यसरि बनेको थियो ! – Jagaran Nepal
तेजबहादुरको परिवारलाइ साइड लगाउने योजना त्यो रात यसरि बनेको थियो !
सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका–१ उम्लिङ खोला गाउँमा ६ जनाको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा थप चार जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले ४६ वर्षीय खड्गबहादुर कार्की, २८ वर्षीय हस्तबहादुर कार्की, ४९ वर्षीय रणबहादुर कार्की र १७ वर्षीय नरेश कार्कीलाई पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ गरिएका चारै जनालाई आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्न लागिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख लालध्वज सुवेदीले जानकारी दिए । गत भदौ २१ गते उम्लिङ खोला गाउँका ५२ वर्षीय तेजबहादुर कार्की, उहाँकी ८४ वर्षीया आमा पार्वती, ५२ वर्षीया श्रीमती कमला, बुहारी ३२ वर्षीया रञ्जना, नाति ११ वर्षीय दीपेन र नातिनी सात वर्षीया गोमाको ह’ ‘त्या भएको थियो ।
एकै परिवारका ६ जनाको ह’ ‘त्यामा सं’लग्न स्थानीय लोकबहादुर कार्कीलाई यसअघि नै प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । मृतक रञ्जनाको हराएको मोबाइल गत शुक्रबार फेला पारेपछि प्रहरीको अनुसन्धान टोली पुन: घटनास्थल पुगेको हो ।
यसरि बनेको थियो योजना !
६ जनाको ह’ ‘त्या योजना भदौ २० राति ८ बजे बनाएको खुल्न आएको छ। घटनाका मुख्या योजनाकार खड्बहादुरसहित ५ जनाले लोकबहादुर कार्कीको घरमा योजना ह’ ‘त्याको योजना बनाएका प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको हो।
सो समूहले २१ गते बिहान तेजकुमार र उनकी श्रीमती कमलाको ह’ ‘त्या गर्ने र अनुकल भए घरमा भएको धनमाल समेत लु’ट्ने योजना बनाएको थियो। उनीहरुको ह’ ‘त्या गरेको अन्यले थाहा पाए उनीहरुको समेत ह’ ‘त्या गर्ने योजना उनीहरुको रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको हो ।
योजना बनाएका खड्गबहादुर कार्की भाद्र २१ गते बिहना पाँच बजे तेजकुमारको घरमा पुगेका थिए । सो दिन तेजकुमारको पिप्ले खेतमा खेतला लगाउने दिन थियो । अभियुक्तहरू खड्गबहादुर, हस्तबहादुर, लोकबहादुर र नरेश खेताला जाने कुरा पहिला नै निस्चित भएको थियो।
त्यही मौका पारेर खड्गबहादुरलाई लोकबहादुरको खेतला एकिन गर्न जान भने । लोकबहादुर अल्छि छ, घरमै गएर खेताला निश्चित गर्न जानु भनि तेजकुमारलाई लोकबहादुर घरतर्फ जान अभिप्रेरित गरि घरतर्फ फर्केको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
लोकबहादुरको घरमा खेताला निस्चित गर्न गएका तेजकुमारले सुतिरहेको लोकबहादुरलाई अल्छि अझैसम्म उठेको छैनस्, भन्दै कराए पछि लोकबहादुर उठेपछि खेतला एकिन गरी उनी फकिए थिए।
तेजकुमार लोकबहादुरको घरतिर जाँदै गरेको देखेपछि खड्गबहादुर र हस्तबहादुर लोकबहादुरको घर पछाडि चि’र्प’ट बोकी तयारी अवस्थामा रहेको प्रहरीसमक्ष बयान दिएका छन्। लोकबहादुर, उनका भाइ नरेश र उनका बुवा रणवहादुर समेत घरमै थिए ।
तेजकुमार घरबाट फर्केने क्रममा योजनाअनुसार लोकबहादुरले भाइ नरेशलाई इसारा गरि आफूले दाउराको चि’र्प’ट र अलैची का ‘ट्ने छु’री बो’की पछि–पछि गइ घर पछाडिको गोगनेको रूख नजिक तेजबहादुरको टा’उको’मा प्र’हा’र ग’रि ल’डा’ए’का थिए । सोही मौकामा खड्गबहादुर र हस्तबहादुरले पनि दाउराको चि’र्प’टले तेजकुमार माथि प्र’हा’र गरेको प्रहरी बयानमा बताएका छन् ।
हस्तबहादुरले च”क्कु ले पे’ट’मा प्र’हा’र गरि तेजबहादुरलाई डिलबाट ल’डा’इ बाटोमा झारी ह’ ‘त्या गरि घो’ ‘प्टो पारेका थिए । घटनाको बेला मृतकले ‘लोकेले मा’र‍्यो, मलाई न’मा’र’ भन्दै हा’रगु’हा’र गरेका थिए ।
तेजबादर कराएको सुनेपछि ‘मेरो श्रीमानलाई न’मा’र’ भन्दै तेजबहादुरकी श्रीमती कमला र बुहारी रञ्जना घटानास्थल आइपुगेको बताइएको छ । प्रहरीका अनुसार तेजकुमारको घरदेखि १ सय ८ मिटर जति दक्षिणतर्फ अर्थात् लोकबहादुरको २५ मिटर टाढा सडकमा तेजकुमारको ह’ ‘त्या गरिएको थियो ।
घटना देखेपछि लोकबहादुले कमलालाई चि’र्प’ट प्र’हा’र गरेको र उनको घाँ टीमा हस्तबहादुरले छु’रा प्र’हा’र गरी ह’ ‘त्या गरेको बताएका छन् । बुहारी रञ्जनालाई नरेशले ठेलेर खोल्सामा झा’रे’को पाइएको छ । खोल्सामा झ’रेकी रञ्जनालाई खड्गबहादुर, लोकबहादुर र हस्तबहादुर मिलि ह’ ‘त्या ग’रेको बताएका छन् ।
मृतक रञ्जनाको शव रणबहादुर र नरेश समेतले कमलाको शव भएको स्थानसम्म पुर्‍याउन सहयोग गरेको खुलेको छ । तेजबहादुरको ह’ ‘त्या भएको स्थानबाट कमला र रञ्जनाको श’व २० मिटर जति टाढा खोल्सामा भेटिएको थियो।
घटनाको बेला मृतक नाबालकहरू दिपेन र गोमासमेत घर नजिकको बाटोमा आएको देखेपछि हस्तबहादुर र लोकबहादुरले उनीहरु तर्फ गए । बाटो छेकी ‘मु’ख थु’नि लोकबहादुरले चि’र्प’टले हि’र्का’ए’र घाँ’ ‘टी ब टा’ री ह’ ‘त्या गरेको बयान दिएका छन् । घरदेखि ३७ मिटरजति माथि खरबारीमा गोमा र त्यहाँबाट ३ मिटर अर्थात् घरबाट ४० मिटरमाथि दीपेनको श’व भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पाँचजनाको ह’ ‘त्या गरेपछि पाँचैजना अभियुक्त मृतकको घरतर्फ गएको बताएका छन् । घरमा ८४ वर्षीया पार्वती कार्की मकै न’ङ्ग्या’इ रहेकी थिइन् । सोही अवस्थामा हस्तबहादुरले समातेर घर पछाडिको गोठ नजिक लगेको खुलेको छ । त्यपछि लोकबहादुरले वृ’द्धाको टाउको भित्तामा ठो’क्का’इ घाँ’ ‘टी ब’टा’री ह’ ‘त्या गरेको बताइएको छ ।
छजनाको ह’ ‘त्यापछि सबैजना घटनामा प्रयोग गरेको चि’र्प ‘ट र छु’ ‘री बोकी लोकबहादुरको घरतर्फ लागे । उनीहरुले र’ग ‘त पखाली छु’ ‘री धो’ ‘ए ‘र बुइकलमा लुकाएको र चि ‘र्प’ ट अ’गेना’मा ड’डा’ए’को बयान दिएका छन् । उनीहरुले र’ग’त लागेको कपडाहरू समेत लुकाएको पाइएको छ । त्यसपछि खड्गबहादुर र निजको छोरा हस्त बहादुर घरतर्फ गएका थिए । घटनापछि फर्कने क्रममा नरेशले लिएर आएको रञ्जनाको मोबाइल स्विच अफ गरि घर मुनिको ओडारमा लुकाएका थिए । सो मोबाइल प्रहरीले अनुसन्धानकै क्रममा फेला पारेको हो ।
घर गएका खड्गबहादुर र उनका छोरा हस्तबहादुर पुनः लोकबहादुरको घरमा आएर सबैजनाले घटनाबारे थप योजना बनाएको पाइएको छ । घटनाबारे कसैले सोधेमा घटनाको बारेमा कुनै पनि कुरा नसुनेको र थाहा नपाएको भन्ने भनेर योजना बनाएका थिए । यदि प्रहरी आइ पत्ता लगाएमा लोकबहादुरले घटनाको जिम्मा लिने निर्णय गरेको खुलेको छ ।
लोकबहादुरले मा’न’सि’क औ’ष’धि खाने भएका कारण उनले नै घटनाको जिम्मा लिने उनीहरुबीच सहमति भएको थियो । ह’ ‘त्यापछि घटनास्थलमा अनुसन्धानका लागि खटिएको ४९ जनाको प्रहरी टोली अभियुक्त खड्गबहादुर कार्कीको घरमा र गाई गोठ सफा गरेर बसेको थियो ।
प्रहरीका अनुसार खड्गबहादुरको बाट घटनास्थल ५५ मिटरजति मात्रै टाढा छ । घटनास्थलबाट लगभग ७० मिटरजतिमाथि गंगा कार्कीको घर छ । डीआइजी बीसीका अनुसार त्यति नजिक घटना हुँदा पनि दुवै परिवारले नसुनेको र थाहा नपाएको बताएका छन् ।
घटनामा सं’ल’ग्न चारै जनालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भई रहेको र अनुसन्धानको क्रममा सबै अभियुक्तहरूले घटना स्वीकार गरेको र घटनामा प्रयोग भएको छुरी, कपडा र हराएको मोबाइल समेत बरामद गरि थप अनुसन्धान भइ रहेको ।